Tue Jun 15 03:11:58 GMT 2021
१ असार, काठमाडौं । सातवटै प्रदेशले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण आज प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्न लागिएको हो । प्...
Tue Jun 15 02:49:09 GMT 2021
पोल्यान्डमाथि स्लोभाकियाको सानदार जित
काठमाडौं - गए राति युरोपेली च्याम्पियनसिप अन्तर्गत भएको खेलमा स्लोभाकियाले सानदार जित निकालेको छ । निकै रोमान्चक बनेको उक्त खेलमा स्लोभाकियाले पोल्यान्डलाई २-१ गोलले पराजित गरेको हो । उक्त खेलको ...
Tue Jun 15 03:18:48 GMT 2021
काठमाडौँ — फुटबल र क्रिकेट त त्यसै भइहाले, नेपाली मिडियामा प्रायः यिनै दुई खेल बढी छाउने गर्छ । पछिल्लो समय भलिबल भयो । त्यसपछि ? ठ्याक्कै उत्तर दिन गाह्रो हुनसक्छ, तर त्यसको नजिक पुग्ने खेल हो, चे...
सेभिया । युरो २०२० को समूह ‘ई’ अन्तरगत सोमबार स्विडेन र स्पेनबिच भएको खेलमा स्पेनले गोलरहित बराबरी खेलेको छ । लुइस एनरिकको टिमले खेलमा लगातार आक्रमण गरेको थियो । जवाफमा स्विडेनले बलियो रक्षात्मक रण...
Tue Jun 15 02:47:30 GMT 2021
विण्डोज १० बन्द गर्दै माइक्रोसफ्ट, आउँदो हप्ता नयाँ अपरेटिङ सिस्टम आउन सक्ने
काठमाडाैं । माइक्रोसफ्टले विण्डोज १० लाई अक्टुबर १४, २०२५ मा बन्द गर्ने भएको छ । अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक भएको १० वर्षपछि कम्पनीले यो ओएसका लागि सपोर्ट बन्द गर्ने मिति घोषणा गरेको हो । थुराेटकाे एक...
Tue Jun 15 02:44:00 GMT 2021
नुनमा निजी क्षेत्र : हचुवाको निर्णय
०७८/७९ को बजेटमा नुनको आयात तथा बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट भाषणको २११औँ बुँदामा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गरा...
Tue Jun 15 03:18:18 GMT 2021
राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण आजबाट शुरु हुने
काठमाडौं। फिलिपिन्समा आयोजना हुन लागेको ‘एसियन सिनियर भलिबल च्याम्पियनसिप’का लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण आज (मंगलवार)बाट शुरू हुँदैछ। आगामी ‘अगस्ट २९’ देखि ‘सेप्टेम्बर ...
Tue Jun 15 08:58:00 GMT 2021
च्यातिएको मन र जबज
राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र कोही हुँदैन, बरु स्थायी हुन्छ स्वार्थ। राजनीति स्वार्थबाट निर्देशित छ। त्यो स्वार्थ राष्ट्रिय स्वार्थ भइदिएको भए आजको यो राजनीतिक विद्रुप अवस्था आउने थिएन। व्यक्तिग...
Tue Jun 15 03:15:05 GMT 2021
The National Human Rights Commission. (File photo) KATHMANDU: The National Human Rights Commission (NHRC) has urged the government to expand contact tracing at community level in view of the grow...
Tue Jun 15 02:46:39 GMT 2021
ठाकुर समूहले कार्यकारणी समिति विस्तार गरे
जनता समाजवादी पार्टी (ठाकुर समूह)ले कार्यकारणी समिति विस्तार गरेको छ । सरकारमा जाने नजाने विषयमा पार्टीका दुई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर विच देखिएको विवाद पछि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव...
Tue Jun 15 03:01:47 GMT 2021
माधव झलनाथ समूहका 'सफ्टलाइनर' नेतामाथि धमाधम ओलीको 'मोहनी मन्तर' : सफल भएका ३ केस
काठमाडौं : 'ओलीले टेम्पुको होइन, जेटको पाइलट हो भनेका थिए एकताका बेलामा, तर एउटा पाइलट त बयलगाडाको पो परेछन्,' एमालेका नेता विष्णु रिजालको भाषणले गडगडाहट ताली पायो। माघ ६ गते प्रेस संगठनले राजधानीक...
Tue Jun 15 03:07:39 GMT 2021
१ असार, काठमाडौं । विद्यालयहरुमा आजबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र अन्तर्गत आजबाट देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गर्ने र साउन एक गतेदेखि पढाइ सुरु गर्ने तयारी छ । सामुदाय...
Tue Jun 15 02:44:31 GMT 2021
अमेरिकी डलर १ को खरिदमा ११६.९४ रुपैयाँ, आज अन्य मुलुकको मुद्रा सटहीदर कति ?
काठमाडौं / नेपाल राष्ट्र बैंकले आज असार १ गते मंगलबार विभिन्न मुलुकको विदेशी मुद्रा विनिमयदर तोकेको छ । तपाई मुद्रा सटही गर्दै हुनुहुन्छ भने अमेरिकी डलर १ को खरिद गर्दा ११६.९४ नेपाली रुपैयाँ पर्द...
Tue Jun 15 03:14:09 GMT 2021
बाटोमा चिप्लिएर ५२ वर्षीय राईको मृत्यु
ईलाम । ईलाम फाकफोकथुम गाँउपालिका २ कोलबोटे का ५२ वर्षीय लाल बहादुर राईको लडेर मृत्यु भएको छ । सोमवार बेलुका ५ बजे गाँउबाट घर फर्कने क्रममा घर नजिकै चिप्लिएर बाटोबाट अदान्जी ७ मिटर तल खसेर मृत्यु भ...
Tue Jun 15 02:43:52 GMT 2021
देशभर बाढीको जोखिम, कहाँ कहाँ? (३ दिनको सम्भावना)
देशभर लगातारजसो वर्षा हुन थालेपछि बाढी, पहिरो तथा डुबानको जोखिम बढेको छ। यसैले बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले दैनिक चेतावनी जारी गर्न थालेको छ। यसै क्रममा आज (मंगलबार) बिहान ७ बजे महाशाखाले आजदेखि बि...
नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
नेपाली पैसा काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स को नाफा घटेको छ । यसअवधिमा नाफा ६५.०४% ले घटेर १ करोड १२ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो...
Tue Jun 15 02:41:00 GMT 2021
एक खर्बभन्दा धेरैले बढ्यो रेमिट्यान्स
मुलुक भित्रने रेमिट्यान्स गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १९ दशमलव २० प्रतिशतले बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । ...
Tue Jun 15 02:43:06 GMT 2021
उपेन्द्रजीको पार्टीलाई हामीले उद्दार गरेका हौं, अब आत्मालोचना गरेमात्रै एकता सम्भव’
काठमाडौं । यतिबेला जनता समाजवादी पार्टीको एउटा हिस्सा सरकारमा छ भने अर्को हिस्सा विपक्षी गठबन्धनमा छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको समूह सरकारमा महत्वपूर्ण हिस्सासहित उपस्थित हुँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको...
Tue Jun 15 03:13:29 GMT 2021
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकी च्यानल एनबीसीका केर सिम्मोन्ससँगको अन्तर्वार्तामा सिम्मोन्सलाई थर्काएका छन् । सोमवार प्रसारित अन्तर्वार्तामा सिम्मोन्सले पुटिनलाई असहमतिका स्वर दबाउने क...
Tue Jun 15 02:40:15 GMT 2021
एसईई खारेज गर्न सरकारको आनाकानी, अध्यादेश ल्याएर ऐन सच्याउन शिक्षाविदको माग
काठमाडौँ : माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई संविधानले नै खारेज गरेपनि सरकारले निरन्तरतामा सघाइ रहेको शिक्षाविज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । अध्यादेश ल्याएर भए पनि एसईई खारेज गर्न ढिलाई गर्न नहुन...
बलिउड अभिनेता सुशान्त राजपूतलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको आरोपमा जेल समेत गएकी अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीले सुशान्तको सम्झनामा भावुक स्ट्याटस लेखेकी छन् । सुशान्तले आत्महत्या गरेको हिजो एक वर...
Tue Jun 15 02:36:37 GMT 2021
यो वर्ष मनसुनबाट झण्डै १७ लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने
काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष मनसुनबाट झण्डै १७ लाख घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ । बाढी र पहिरो दुवै प्रकारको विपदबाट १६ लाख ८७ हजार ४ सय ९७ घर परिवार प्रभावित हुने अनुमान राष्ट्रिय विपद् जोख...
Tue Jun 15 03:04:00 GMT 2021
खेतबारीको काम गर्दा दूरी कायम गर्न आग्रह
काठमाडौं । खेतबारीको काम गर्दा दूरी कायम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मनसुन सुरु भएसँगै खेतबारीको काम सुरु हुने र त्यसबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्नसक्ने भन्दै मन्त्रालय...
Tue Jun 15 02:28:00 GMT 2021
नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले सरकारी कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा निगमको विमान प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । निगम व्यवस्थापनले नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नाग...
Tue Jun 15 03:03:25 GMT 2021
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज (मंगलबार) आगामी वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट ल्याउँदै छ । कोरोना नियन्त्रण र थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी ल्याउन लागेको बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा वृद्धि हुुने सरक...
Tue Jun 15 02:31:00 GMT 2021
राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमको प्रशिक्षण आजबाट
काठमाडौं- राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमको प्रशिक्षण आज (मंगलबार) बाट सुरु हुँदैछ। गत जेठ २१ गतेबाट सुरु हुने भए पनि केही दिनका लागि स्थगित भएको प्रशिक्षण आजबाट सुरु हुन लागेको हो। ‘कोभिडको टेस्ट र उपत...
Tue Jun 15 03:02:48 GMT 2021
सप्तरी । मनसुन शुरु हुन लागेका बेला खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजना राजविराजले आपत्कालीन नदी नियन्त्रणकार्य गर्न असमर्थ रहेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा आपत्कालीन नदी...
Tue Jun 15 03:02:24 GMT 2021
भारतमा सोमबार ५९ हजार ९५८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो बितेको ७६ दिनयताको सबैभन्दा कम संक्रमित पुष्टि भएको भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाए...
Tue Jun 15 02:55:07 GMT 2021
All seven provinces are presenting fiscal budget today
(Image for Representation) KATHMANDU: All the seven provinces are presentingabudget for the fiscal year 2021/22 today. There has beenaprovision that the provincial governments have to bring t...
Tue Jun 15 02:58:05 GMT 2021
कर्जाको सीमालाई बिनासर्त नवीकरण गर्न पूर्वका व्यवसायीको माग
विराटनगर -कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण धराशायी उद्योगहरूको उत्थानका लागि हाल सबै प्रकारका उद्योग–व्यवसायमा प्रवाह गरिएका कर्जाको सीमालाई बिनासर्त नवीकरण गरिनुपर्ने माग पूर्वका उद्योगीले गरेका छन् । ...
Tue Jun 15 02:28:42 GMT 2021
एसइईको नतिजा आउन अझै एक महिना लाग्ने, यस्तो छ तयारी
काठमाडौं, असार १ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा आगामी साउन १५ भित्र ल्याउने तयारी गरेको छ । विद्यार्थीको परीक्षाफलसम्बन्धी सम्पूर्ण काम साउन १५ भित्र पूर...
Tue Jun 15 02:28:57 GMT 2021
कोपा अमेरिकामा बोलिभियामाथि पाराग्वेको पुनरागमन जित
एजेन्सी । कोपा अमेरिका अन्तर्गत समूह ए को खेलमा १० खेलाडीमा समेटिएको बोलिभियामाथि पाराग्वेले ३–१ गेलअन्तरको प्रभावशाली जितसहित विजयी सुरुआत गरेको छ । ब्राजिलमा जारी प्रतियोगिताको केहिबेर अघि सम्पन...
Tue Jun 15 02:56:31 GMT 2021
विश्व टेस्ट च्याम्पियनशिपको विजेताले १६ लाख अमेरिकी डलर पाउने
काठमाडौं। आगामी जुन २२ देखि जुन २६ सम्म आयोजना हुन लागेको ‘विश्व टेस्ट च्याम्पियनशिप’ फाइनलको विजेता टोलीले १६ लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार स्वरुप पाउने भएको छ। अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ‘आईसीसी’ले ...
Tue Jun 15 08:39:00 GMT 2021
बेनी : निरन्तरको बर्षासँगै कारण म्याग्दीका मुख्य सडकमा यातायात सेवा ठप्प बनेका छन्। म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी, बेनी–जोमसोम र म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन...
Tue Jun 15 02:26:25 GMT 2021
एसइई मूल्यांकन : विद्यार्थीलाई ८० नम्बरभन्दा बढी दिँदा अब कारण खुलाउनु पर्ने
यस वर्ष कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को मूल्यांकन गर्दा कुनै पनि विद्यार्थीले ८० भन्दा धेरै अंक ल्याए शिक्षकले कारण खुलाउनु पर्ने भएको छ। शिक्षकले आफ्नो विषयमा ८० नम्बरभन्दा धेरै अंक...
युरोकप : चेक रिपब्लिक र स्लोभाकियाको जित, स्पेन र स्विडेन बराबरी, आज दुई खेल हुने
युरोकप फुटबलमा स्पेन र स्विडेनले बराबरी खेलेका छन् । गएराति स्पेनको सेभियामा भएको खेलमा घरेलु टोली स्पेनलाई स्विडेनले गोलरहित बराबरीमा रोकेको हो । यस्तै युरोकपमा चेक रिपब्लिकले विजयी सुरुवात गरेको...
Tue Jun 15 02:40:21 GMT 2021
विश्वकप छनोटपछि कोपामा मेसीको अर्जेन्टिनालाई फेरि चिली तगारो
विश्वकप छनोटपछि कोपामा मेसीको अर्जेन्टिनालाई फेरि चिली तगारो काठमाडौं । केही दिन अघि विश्वकप छनोटमा चिलीसँग रोकिएको अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकमा पनि फेरि रोकिएको थियो । नेपाली समय अनुसार आज बिहान सकि...
Tue Jun 15 02:55:15 GMT 2021
काठमाडौँ- आज सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेशले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका ह...
Tue Jun 15 02:53:02 GMT 2021
उपत्यकामा आजबाट निषेधाज्ञा खुकुलो, के-के खुल्छन्?
आजबाट काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ। अबका सात दिन बिहान तथा साँझ हिडडुलदेखि केही व्यापार व्यवसाय गर्न पाइनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण कम नभएपछि निषेधाज्ञा थपिएको हो।...